आज मंगलबार, धन प्राप्त गर्न चहानुहुन्छ? त्यसो भए यसो गर्नुस् ! – Khabar Silo
Posted on April 13, 2021 April 13, 2021 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौँ । मान्छेको शरिरमा हुने कोठिले पनि उसको भाग्य बताउने ज्योतिष विज्ञानले बताउने गरेको छ। तपाई सबैमा कहिँ न कहिँ कोठी हुन्छ तर ती सबै शुभ हुदैनन्। कतिपयले त आफुलाई सुन्दर देखाउन आफै कृतिम कोठि पनि बनाउछन्। त्यो भन्दा पनि शरिरमा प्राकृतिक रुपमा विभिन्न स्थानमा हुने कोठिहरुले कस्तो संकेत गर्छ त ? ज्योतिष विज्ञानको आधारमा […]